WAR LA SUGAYAY: Real Madrid, Liverpool, Man United Iyo Man City Oo War Cad Helay Xilli Uu Kylian Mbappe PSG U Sheegay Kooxda Uu Doonayo - Gool24.Net
WAR LA SUGAYAY: Real Madrid, Liverpool, Man United Iyo Man City Oo War Cad Helay Xilli Uu Kylian Mbappe PSG U Sheegay Kooxda Uu Doonayo
September 15, 2020 Apdihakem Omer Adam
Da’yarka kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe ayaa lagu soo warramayaa inuu madaxda sarre ee kooxdaas la wadaagay halka uu doonayo inuu ka ciyaaro xilli uu dhawaan u sheegay inay iska fasaxaa suuqa xagaaga dambe ee 2020-21.
Paris Saint-Germain ayaa filanaysa inay dagaal dalabaadka laga soo gudbinayo ah la kulanto haddii ay ku fashilanto inay ku qanciso inay heshiis cusub ka saxeexato xilli qandaraaskiisa haatan uu dhacayo June 2022.
21 sano jirkan ayaa hore u amaanay guusha kooxda kusoo guuleysatay Premier League ee Liverpool xilli ay sidoo kale tartankiisa qayb ka yihiin kooxaha labada Manchester.
Warar cusub ayaa sheegaya in Manchester City oo aan hore loola xidhiidhinayn Mbappe ay macquul tahay inay saxeexiisa u dhaqaaqdo halkii ay kaga noqon lahaayeen kabtanka Barcelona ee Lionel Messi.
Si kastaba, sida uu sheegayo saxafi Josep Pedrerol, Kylian Mbappe ayaa xilli horeba kooxdiisa Paris Saint-Germain u sheegay inuu doonayo ku biirista dhinaca Real Madrid oo riyadiisa lagu tilmaamay.
Pedrerol ayaa u sheegay muuq-baahiyaha ree Spain ee El Chiringuito sida uu Mbappe ugu riyoodo inuu ku ciyaaro maaliyada cad ee Real Madrid isla markaana uu aaminsan yahay in kooxdaasi ay kor u qaadi karto riyadiisa ah inuu Ballon d’Or ku guuleysto.
Mid kamida furayaasha muhiimka u ah go’aanka Mbappe ayaa ah inay Los Blancos joogaan xiddigo French ah oo ay dhalasho wadaagaan si lamid ah tababare Zinadine Zidane oo uu si weyn u qiimyo 21 sano jirkaasi.
Paris ayaa ku rajo weyn inay Kylian ku qancin karto in mustaqbalkiisu yaalo Parc des Princes iyagoo dhawaan gaadhay Final-kii Champions League ee ugu dambeeyay.